Bitcoin Hardforks yintoni na? - Blockchain News
Uthungelwano Bitcoin kuphunyeziwe a lot of iifolokhwe ukususela kokufika kwalo cryptocurrency ku 2008. Ezi neefolokhwe kwakufanele ukuba ukunceda ababhekisi ukusombulula iingxaki ezifana scalability, amandla aphantsi TPS (yokwenzekayo ngomzuzwana), Ubungakanani Befayile limited, kwaye ngokubanzi ukuze kube lula Bitcoin network sindisa. Ekubeni bitcoin ekubeni source software evulekileyo, nawuphi na umsebenzisi kwi-network Ungakwazi ukukopisha, ulungise, kunye nokuqalisa imithetho yayo ikhowudi. Ngaloo ndlela, nawuphi na umsebenzisi sinokudala iprotocol ezintsha kunye kwezidanga zithathwa neefolokhwe, hardforks angala ezithambileyo okanye uthungelwano.
Softfork utshintsho ingathityazwa blockchain protocol ukuba aluthinteli iindawo kwekhonkco entsha yokunxibelelana iindawo ezithile chain endala. Le softfork Umzekelo engcono eyahlukanisiweyo Ubungqina okanye SegWit. abasebenzisi Network iqhagamshelane le softfork ngo-Agasti ukuze ukwandisa isakhiwo iintengiselwano block ukuze beyoba isithuba memory ngaphantsi. Le softfork kwavumela iibhloko ukubamba inkcazelo engakumbi ngaphandle kokutshintsha umsebenzi womnatha Bitcoin.
Hardfork i kwitsheyini elitsha womnatha luqokelelane xa imithetho emitsha baba ingahimbiselani protocol endala blockchain. Kule meko, iindawo yeenethwekhi abatsha nabadala kwakungayi kuba nako “ukuxoxa,” ukususela hardfork kuthetha ukutshintsha indlela imvumelwano ngokwayo. Ngoncedo lwe hardforks, abasebenzisi inethiwekhi ukuzama ukucombulula iingxaki ezingundoqo network Bitcoin njengezinga bandwidth yenethwekhi evumela ukuba ukuqhubekekisa ukuya transactions ezisixhenxe nganye ubungakanani ibloko yesibini kwaye kuphela ukuba, ngokuvumelana abaninzi, kufuneka ubambe ngaphezu 1 MB of data. Hardforks kwakhona ukuba abasebenzisi ukwenza cryptocurrencies ezintsha, njengoko iindlela bitcoin.
hardforks edlulileyo iziphumo
Bitcoin XT wokuqala Bitcoin network hardfork, eyayibanjelwe Agasti ka 2015. le hardfork, olusekelwe lwemvelaphi ikhowudi ye Bitcoin Core, bekufanele ukuba ukunyusa ubungakanani block ku 8 MB, ngaleyo ndlela kwande bandwidth network ukuya ku 24 iintengiselwano ngomzuzwana, kodwa cryptocurrency zange bafumane inkxaso eyimfuneko evela kubahlali kwemigodi. Ukwenza Bitcoin XT kwakudinga 75% zonke basemgodini womnatha Bitcoin ukungena kwinethiwekhi, kodwa kuphela 12% kubo abaxhasa hardfork. Ngale ndlela, enye ababhekisi phambili eziphambili Mike Hearn wathengisa cryptocurrencies bakhe waza washiya le projekthi 2016. Nje ngeziphumo, kuphela 20 nodes basala wokuqala 4,000 units, awayenzayo womnatha ayifumaneki ngelo mzuzu.
Bitcoin hardfork Unlimited laphehlelelwa ukutshintsha ubungakanani block ngoMeyi 2016, xa basemgodini olucetywayo ukukhetha ubungakanani block womnatha elizayo. Ngokutsho mgodi, ekwandiseni ubungakanani ibloko akazukuphelisa etyhwini kodwa ukuphucula inzuzo yazo ngokwandisa imirhumo uthumo iyonke kwibhloko. Kodwa hardforks abagxeki, uninzi lwabo developers, waphawula ukuba le icebo ukwandisa amathuba ukuba emachibini ezinkulu ezisembindini mgodi uza kuqalisa ukulawula uphuhliso yenethiwekhi.
Oku kwakuthetha ukuba abembi nge zenzeko iintsimbi oluncinane ngeke bakwazi ukuthatha inxaxheba ngempumelelo kuphuhliso uthungelwano kwaye ekuhambeni kwexesha iza ithathelwe ngokupheleleyo. Ngaloo ndlela, inethiwekhi wayeza kuba esembindini emachibini eziliqela. Iingcali kananjalo bugs emininzi Bitcoin software Unlimited, leyo yokuqala ngo-Apreli yaye emva koko ngoMeyi kulo nyaka kwakhokelela ukuwa 70% i nodes kwinethiwekhi, ngaloo ndlela intembelo yoluntu crypto kula neefolokhwe.
project Bitcoin Classic laphehlelelwa ukusombulula iingxaki scalability network Bitcoin, engazange yenziwe isonjululwe le Bitcoin XT hardfork. Injongo yale projekthi ibalelwa ukunyusa ubungakanani block ku 2 MB uze emva koko 4 MB. Kodwa lo hardfork zange bafumane inkxaso eyimfuneko zoluntu crypto. Ekuqaleni kakhulu ngaphezu 2,000 nodes bathatha inxaxheba kule projekthi,” kodwa abaku 100 yi 2017. NgoNovemba kwabhengezwa ukuba le projekthi iyavala emva SegWit2X sele irhoxisiwe kunye ngabaqulunqe ezi projekthi ukuba inkxaso ngokuphandle Bitcoin Cash, i cryptocurrency entsha.
Bitcoin Cash yeyona adumileyo kunye nempumelelo hardfork network Bitcoin. Ngenxa yoko kukho hardfork protocol ngenkani, Bitcoin Cash wabonakala phezu block 478,558 on 1 EyeThupha. Njengenxalenye yale ifolokhwe, ubukhulu block linyuke ukusuka 1 MB ukuba 8 MB, kwaye oku, ekujikeni, iimali zokusebenzisa ukwandisa umthamo network nokuphungula. emva hardfork, Abanini Bitcoin waba alinganayo Bitcoin Imali e-izipaji zabo. Uthungelwano entsha uye walungiselela indlela esikhusela kwintengiselwano ngaxeshanye ngo blockchains ezimbini. namhlanje, 13 EtiMnga, izinga lotshintshiselwano Bitcoin Cash yi $1,616.84 kwaye okwangoku ikwindawo yesithathu yi-capitalisation cryptomarket.
Bitcoin Gold cryptocurrency badalwe 24 Oktobha ngenxa hardfork kwi ibhloko 491,407 olwenziwe yinkampani kwemigodi Lightning .GOKO e Hong Kong. Injongo yale projekthi iza kuba imali nomtsalane ngakumbi kuba basemgodini non-zobungcali ngaphezu bitcoin yokuqala. Ngale ndlela, inani elikhulu abasebenzisi womnatha na lundiphakamele Bitcoin Gold kwaye Isaci cryptocurrency yi “ukwenza bitcoin zokwabela abaphantsi amagunya kwakhona.” Endaweni endala Ubungqina-of-Work lwabasunguli protocol hardfork ukusebenzisa entsha, Equihash. Le algorithm olubuthathaka kakhulu ubungakanani imemori yofikelelo oluzenzekelayo (i-ram) kwaye kananjalo kusetyenziswa xa kokurhweba cryptocurrency Zcash. namhlanje, 13 EtiMnga, ngerandi Bitcoin Gold $276.88 kunye capitalisation emakethe ngaphezu $4.5 billion.
Bitcoin Diamond nguye hardfork, leyo Kwathi ekupheleni kukaNovemba kwi ibhloko 495,866. Bitcoin Diamond mgodini kudala iibhloko kwi algorithm entsha ubungqina umsebenzi (POW). kwakhona, lo cryptocurrency olwahlukileyo kwesele yokuqala yi amaxesha ezilishumi kwandisa umthamo ukukhutshwa kunye nesayizi ibhloko 8 MB. Developers bakholelwa ukuba le hardfork senzelwe ukusombulula iingxaki ezifana nokunqongophala wokhuseleko wabucala, slow transaction isiqinisekiso, threshold ophezulu nxaxheba ezintsha ukungena kwinethiwekhi. Ukudala zemigodi Bitcoin Diamond, e-wallet, ikhowudi nodes, API, kwakunye ukudibanisa ikhowudi yemvelaphi evulekileyo kwi GitHub icetyelwe ekupheleni konyaka.
Super Bitcoin, a cryptocurrency entsha, wabonakala phezu 12 EtiMnga, njengoko ngenxa iyantlukwano womnatha Bitcoin kwi ibhloko 498,888. I-Super Bitcoin Isaci “ukwenza Bitcoin omkhulu kwakhona.” Kuyaphawuleka ukuba endaweni ICO emveli eli iqonga usebenzisa indlela entsha ukutsala utyalo-mali, wabiza Iminikelo lokuqala ifolokhwe (IFO). Le hardfork inikeza iyunithi kwandisa ukuya ku 8 MB. Uthungelwano usebenzisa iteknoloji Lightning Network eza kuvumela liqhuba i esingenakubalwa of micropayments. Ngaphezu, network Super Bitcoin iyasebenza izivumelwano smart. Developers phawula, kunjalo, into ephume nefolokhwe yenzelwe ukuphumeza iminqweno crypto ekuhlaleni kwaye kunokuba umfuniselo.
Lightning Bitcoin - kwicandelo womnatha uya yezizathu kwenzeka 23 kuDisemba kwi ibhloko 499,999. Ngabaqulunqe ezi kwinethiwekhi ufuna ukudibanisa iimpawu best bitcoin kunye ethereum. Ngaloo ndlela, Kwakhona ubugcisa Lightning Network iza kusetyenziswa kuthungelwano entsha zokwenza micropayments kunye DPOS ezintsha (Ubungqina isibonda Igunyabantu labathunywa) indlela aya kusetyenziselwa ukuvumelana. Ukwandisa unit ukuya ku 2 MB, nto leyo eza kwandisa isantya intengiselwano kwaye kulindeleke ukuba inethiwekhi iya kuxhasa izivumelwano smart. Kwakhona Uthungelwano iya kuba ngokwesantya ukwanda kwamathuba ibloko entsha eza ukuya 3 imizuzwana. Nangona hardfork akaxhasi SegWit, inika ukhuseleko kwintengiselwano ngokuphindaphindiweyo. kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba nangona umhla yokuqalisa abasondela, le projekthi iye nangoku ukucwangcisa i website ukusebenza.
Bitcoin hardfork Good, iqalwa cryptocurrency yomtyali Chinese Chandler jae, ukuba kwenzeke kwi ibhloko 501,225, on 25 EtiMnga. Lo somashishini wathi pre-yokombiwa luya kubakho, ngelixa umthamo ukukhutshwa kuya kuthetha ukuba 21 million Nkulunkulu. ukutshintshiselana abaliqela stock sele baqinisekisa ukuba baza kusebenza kunye cryptocurrency entsha, eza onesiphiwo ukuba bitcoin abanini kwi umlinganiselo omnye ukuya kwenye.
Bitcoin Platinum Yayichazwa ngokungathi Bitcoin network hardfork, apho bekumele ukuba kwenzeke kwi ibhloko 498,577 kwaye udale cryptocurrency entsha. kunjalo, njengoko Cointelegraph ibika, i hardfork kuyinto esibhekene owadalwa umfana South Korea, kwaye lwemali ngokwayo ikopi epheleleyo ikhowudi Bitcoin Cash.
Co-umsunguli ZenCash, Rob Viglione ukholelwa ukuba neefolokhwe ke inyathelo elaneleyo lophuhliso blockchain:
Vula-umthombo eziphila zenzelwe ukuba nokuguquguquka, ingaba loo nto nge e-project ukuphucula okanye ifolokhwe apho yonke isiseko ikhowudi uya kwicala engahambelaniyo. Evolution yinkqubo mdaka, ngoko ke asisoloko kuba kuhle, Kodwa maxa wambi yiloo ndlela kuphela ukuba mpumelelo enkulu.
Umphuhlisi phambili blockchain in Sweetbridge, bob yaseSummerville ukholelwa ukuba neefolokhwe ezilungileyo kuba kuvumela amalungu ukuba isigqibo sokuba inethiwekhi kufuneka aphuhlise:
Kukho iminyaka yokoyika, ukungaqiniseki, nentandabuzo kuluntu Bitcoin malunga Amathuba iifolokhwe nzima. Kucacile kum ukuba uninzi loo ngxolo sele evela kumaqela ngokukhetha ukunyanzelwa yokuhlolwa phezu kwiimarike simahla kunye nelungelo secede.
Akukho nto injalo njenge 'ifolokhwe embi.' Akuyomfuneko ukuba nditsale iqela elinye okanye amanye. Nokuhlola kunye nokhuphiswano ezilungileyo. Makhe imarike isigqibo inxaxheba apho ubona ixabiso.
Amava am okufunda kakhulu ezixabisekileyo ETH / etc yokwahlulahlula kukuba ngemixokelelwane abambalwa zenza. Ukuba uluntu crypto uye ukungaboni ngasonye, ke ungaya iindlela zakho eyahlukileyo, nokuba kuhle nje. Ufumana umtshato zombini uqhubeke nobomi bakho, kunokuba abahlala kunye ziinzingo ngonaphakade, rhoqo bexambulisana. "
Kodwa Director of LOOMIA, uSawule Lederer has a malunga ngokupheleleyo ngayo:
"Yokunyakamisa emarikeni kunye neenguqulelo ezahlukeneyo Bitcoin into edidayo kubasebenzisi kwaye phasi ibango ukuba kukho inani eliqingqiweyo Bitcoins-ekubeni ungasoloko ifolokhwe kwaye phinda,"Kuphawula Lederer. "Yintoni lenkathazo kakhulu kukuba le ineziphumo ezilungileyo ezithi zibekho akhula ukusuka bexabana okuncinane ekuhlaleni Bitcoin ngendlela yokusingatha ubukhulu bobungakanani block. Endaweni yokuba eza isivumelwano, umphakathi, developers, kunye mgaqo fracturing ngokwamaqela ahlukeneyo. "
Umnikazi sokuqaliswa NYSE ...
Post Previous:Blockchain News 11 EyoMqungu 2018
Post Next:Blockchain News 12 EyoMqungu 2018